Firenena maro no nampiato ny sidina iraisam-pirenena noho ny variana COVID-19 vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Firenena maro no nampiato ny sidina iraisam-pirenena noho ny variana COVID-19 vaovao
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) dia nilaza fa ny hamaroan'ny fiovan'ny karazana vaovao hita dia miteraka ahiahy lehibe momba ny fiantraikan'izany amin'ny diagnostika, ny fitsaboana ary ny vaksiny.
Ny filohan'ny Vaomiera Eoropeana (EC) Ursula von der Leyen, androany, dia niantso maika ny fitsangatsanganana an'habakabaka rehetra mankany sy avy any amin'ireo firenena misy tranga voalaza momba ny valan'aretina COVID-19 mba hofoanana mandra-pahazoan'ny governemanta sy ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana ny loza mety hitranga. virus variant pose.
Danemark, Maraoka, Filipina ary Espaina no lasa firenena farany nametraka fameperana fitsangatsanganana amin'ny fitsangatsanganana tsy ilaina rehetra.o Afrika Atsimo sy ny firenena manodidina, miditra amin'ny lisitr'ireo firenena mihamitombo amin'ny fehin-kibo amin'ny tadin'ny COVID-19 'super mutant'.
The vondrona EraopeaninaNy fanambarana dia tonga taorian'ny nanatevin-daharana an'i Danemark sy Espaina tamin'ireo firenena eoropeanina hafa tamin'ny famerana ny fitsangatsanganana any amin'ny faritra, raha toa kosa, eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, i Maraoka sy Filipina dia nanao dingana mitovy amin'izany mba hamerana ny fivezivezena any amin'ireo firenena heverina ho atahorana.
Nanambara i Alemaina Afrika Atsimo "faritra variana otrikaretina," hoy ny minisitry ny fahasalamana Jens Spahn nanoratra tao amin'ny Twitter. Midika izany fa "ny zotram-piaramanidina ihany no avela hitaterana Alemà" avy ao amin'ny firenena.
Ny fahatongavana rehetra dia takiana hanao confinement mandritra ny 14 andro, na dia efa vita vaksiny tanteraka amin'ny COVID-19 aza izy ireo na efa sitrana, hoy i Spahn nanampy.
Nanao hetsika mitovy amin'izany koa ny manampahefana Holandey, nanambara ny fandrarana ny sidina avy any Afrika Atsimo mankany Holandy manomboka amin'ny misasak'alina.
Italia sy Repoblika Tseky koa dia nanaraka haingana ireo firenena eoropeanina hafa tamin'ny fametrahana fameperana.
Noraran'i Roma ny fidirana amin'ireo tonga rehetra avy any Afrika Atsimo, Lesotho, Botswana, Zimbaboe, Mozambika, Namibia ary Eswatini. Nilaza ihany koa i Prague fa tsy mahazo miditra any Czechia ireo tsy teratany izay nitsidika an'i Afrika Atsimo vao haingana.
Taty aoriana dia nilaza i Frantsa fa nampiato ny sidina avy any amin'ny faritra atsimon'i Afrika mandritra ny 48 ora farafahakeliny, miaraka amin'ny minisitry ny fahasalamana Olivier Veran nanambara fa ireo rehetra tonga avy any amin'ny faritra dia hosedraina sy hanara-maso akaiky.
Ny praiminisitra frantsay Jean Castex dia nanambara fa ny fifampiresahana eo amin'ireo mpitarika ao amin'ny Vondrona Eoropeana momba ny fomba hamaliana ilay tebiteby vaovao, izay mbola tsy voamarina ao amin'ny kaontinanta, dia hatao “ao anatin'ny ora manaraka”.
The World Health Organization (OMS) dia milaza fa ny hamaroan'ny fiovana ao amin'ilay variana vao hita dia miteraka ahiahy lehibe momba ny fiantraikan'izany amin'ny diagnostika, fitsaboana ary vaksiny.
Noferan'ny UK ihany koa ny fitsangatsanganana an'habakabaka mankany Afrika Atsimo sy ny mpifanolo-bodirindrina aminy, miaraka amin'ny masoivohon'ny fiarovana ara-pahasalamana ao amin'ny firenena nilaza fa "ity no variana ratsy indrindra hitanay hatreto."
Ny firenena any an-dafin'i Eoropa dia niahiahy momba ilay variana vaovao ihany koa, miaraka amin'i Malezia, Japon, Singapore ary Bahrain mametraka fameperana amin'ireo mpandeha avy any amin'ny faritra atsimon'i Afrika.
Isiraely nametraka fandrarana ihany koa ny fahatongavana avy atsimon'i Afrika nefa avy eo dia nanitatra io 'faritra mena' io ho saika manerana ny kaontinanta manontolo, afa-tsy ny firenena afrikana avaratra sasany.